Izindaba - Liyini ibhokisi lepulasitiki lezokwelapha
Ibhokisi lepulasitiki lezokwelapha (elibizwa nangokuthi ibhokisi lomuthi) noma amabhokisi ezokwelapha epulasitiki, asetshenziswa kakhulu ezibhedlela nasemindenini. Ingasetshenziselwa ukugcina izidakamizwa, amadivayisi wezokwelapha noma ukuwaphatha ukubona iziguli.
Ibhokisi lezokwelapha, njengoba igama lalo lisho, liyisitsha sokugcina imithi nezinto zokusebenza zezokwelapha, ezingakhishwa futhi zisetshenziswe uma kunesimo. Uma kuqhathaniswa nekhithi yezokwelapha, ibhokisi lezokwelapha linomthamo omkhulu namandla amakhulu, angagcina izinto eziningi. Amakhithi ezokwelapha angagcina kuphela izinto eziphuthumayo ukuze zisetshenziswe ngesikhathi esisodwa. Amabhokisi ezokwelapha ahlukile ngoba agcina izinto eziningi ngenxa yobukhulu bazo obukhulu.
Ukuhlukaniswa kwamabhokisi ezokwelapha epulasitiki
Ibhokisi lezokwelapha le-1.Family Storage
Odokotela baphatha amakhithi wezokwelapha
3. Ikhithi yosizo lokuqala
4.Amabhokisi okugcina izidakamizwa ezibhedlela
Ibhokisi lomuthi ohlakaniphile
Ibhokisi lezokwelapha le-6
7.Comprehensive isebenzisa ibhokisi lezokwelapha
Ibhokisi lezokwelapha elizenzakalelayo
Ukuhlukaniswa ngesitayela nangesakhiwo
Ibhokisi lezokwelapha elingu-1
2.Multichamber ibhokisi lezokwelapha
Ibhokisi lezokwelapha le-3.Multidrawer
Ibhokisi lomuthi wokuqinisa
5.Large usayizi umuthi isitoreji ibhokisi
Ibhokisi lezokwelapha lomndeni losizo lokuqala
Odokotela baphatha ikhithi yezokwelapha
Ibhokisi lezokwelapha leMultidrawer & Multichamber
Ibhokisi lezokwelapha elilula
Ibhokisi lemithi ehlakaniphile Ibhokisi lezokwelapha elizenzakalelayo
Ibhokisi lezokwelapha ledeskithophu
I-Comprehensive isebenzisa ibhokisi lezokwelapha
Amabhokisi okugcina izidakamizwa ezibhedlela
Yiziphi izinto zepulasitiki ezisetshenziselwa ukwenza izingxenye zebhokisi lezokwelapha?
Ezibhedlela, umnyango noma uhlobo oluthile lwezinto zokwelapha nezinsimbi kuvame ukuhlanganiswa kwiphakheji elilodwa noma eziningana ezikhethekile.
Leli fomu lemithi ephelele lilungisiwe futhi lahlukaniswa. Ibizwa ngokuthi ibhokisi lezokwelapha.
Ngaphandle kwebhokisi lezokwelapha elisetshenziswe enkundleni yempi noma izinga lokushisa eliphakeme nengcindezi ephezulu yemvelo ekhethekile, iningi lamanye amabhokisi ezokwelapha enziwe ngokubunjwa kwepulasitiki. Isibonelo: ibhokisi lomuthi wesibhedlela, ibhokisi lomuthi wasendlini, ibhokisi lomuthi wosizo lokuqala nokunye.
Izinto zepulasitiki esivame ukuzisebenzisa ukwenza ibhokisi lezokwelapha yi-PP, ABS, PC.
Izici zebhokisi lezokwelapha ze-PP: umthamo omkhulu, isisindo esincane, izindleko eziphansi zokukhiqiza ngobuningi, zingakwazi ukugcinwa kwezidakamizwa ezahlukahlukene, ubufakazi bomswakama, i-anti-cross-flavour. Kufanelekile ukugcinwa kwezidakamizwa zasendlini nasesibhedlela.
Ngokwesidingo sokusetshenziswa, ezinye izingxenye zepulasitiki noma zensimbi zisetshenziselwa ukufana nezingxenye zebhokisi le-PP ukuqinisa noma ukunikeza imisebenzi eminingi ebhokisini.
Ngokusho kwabasebenzisi, imvelo nokugcinwa kwezidakamizwa noma amadivayisi wezokwelapha, ibhokisi lomuthi linezitayela ezahlukahlukene, osayizi nezakhiwo zangaphakathi.
Yiziphi izingxenye zepulasitiki ezisebhokisini lomuthi?
Ibhokisi lemithi elinezingxenye zepulasitiki ikakhulu lifaka izingxenye ezilandelayo zepulasitiki
3. Itreyi langaphakathi, amabhokisi edilowa
Injection Molding Technology and tips for plastic medical box components
1. Ngokuvamile, ubukhulu bebhokisi lemithi elilula lincane, futhi ukwakheka kwalo kulula. Ikhava ephezulu, umzimba webhokisi nezingxenye zangaphakathi ngokuvamile zingenziwa ngepulasitiki ye-PP.
2. Ezingxenyeni ezingaphandle zebhokisi lezokwelapha elinemisebenzi eminingi ngesakhiwo esiyinkimbinkimbi, imvamisa i-ABS nezinto ze-PC ezinosayizi ozinzile zivame ukusetshenziswa.
3. Izingxenye zensimbi ye-Aluminium kwesinye isikhathi ziyangezelwa ukuqinisa imiphetho namakhona amabhokisi emithi ngokuvamile okudinga ukuhanjiswa.
4. Ukujula kwebhokisi lomuthi kukhulu ngokuqhathaniswa, futhi akukho ukuqiniswa okwanele ngaphakathi kwebhokisi. Izinto ze-ABS noma ze-PC ziyadingeka.
5. Izinto ezisetshenzisiwe kumele zanelise i-ROHS noma i-FDA. Ukugcinwa nokusetshenziswa kwezinto kufanele kuhlukaniswe nezinye izinto.
6. Imishini yokujova kanye nendawo yokukhiqiza kufanele ihlanzeke futhi iqoqeke ukuhlangabezana namazinga.
Ikhithi yezokwelapha inemakethe ebanzi, ukukhiqizwa kwayo kufanele kuthobele amazinga athile embonini. Inkampani yakwaMestech yenza isikhunta sepulasitiki nokukhiqiza ibhokisi lezokwelapha ngokwezifiso.Sicela uxhumane nathi ukuthola eminye imininingwane.